UZikalala nethemba lokuvuka komnotho waKwaZulu-Natal emuva kwezibhelu – Sivubela intuthuko Newspaper
UMNU Sihle Zikalala onethemba ngokusimama komnotho waKwaZulu-Natal emuva kwezibhelu
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uthi isifundazwe sikhahlamezeke ngoR2 billion ngesikhathi lesi sifundazwe sibhekene nodlame lokucekelwa kwempahla nokutatshwa kwezitolo obekungenyanga edlule uJuly.
Nokho uKhuzeni uthi thokola themba amathemba ayewukela njengoba uhulumeni awuholayo unezinhlelo zokunxenxa izinkampani ezinkulu ebezisebenzela kulesi sifundazwe ukuba ziqhubeke nokusebenza ukusimamisa isifundazwe.
Phakathi kwezinkampani ezinkulu ezalahlekelwa kakhulu ngesikhathi kutatshwa impahla ezitolo nakuma-warehouse kubalwa i-Unilever neMassmart okuthiwa sezivumile ekuhlangabezaneni nesifundazwe ukusimamisa umnotho.
UKhuzeni uthe noma kuvele loR2 billion wale nhlekelele kodwa kusengenzeka ukuthi sikhule lesi samba ngenhla yomonakalo owadaleka ngesikhathi sezibhelu. “Okusavelile okwamanje ukuthi iminyango kahulumeni idinga uR2 billion ukusimama kuthi omasipala bona kube uR74 million. Singakuqinisekisa ukuthi umsebenzi wokuhlonza umonakalo okwamanje uphothuliwe nguhulumeni nomasipala ngalezi zibhelu,” usho kanje.
Uhulumeni wesifundazwe kuyimanje usemshikashikeni wokubumba isifundazwe kwezomnotho nokuhlanganisa abantu abasakhele ukuba babe munye. Kunethemba ngokubuya kwezitolo ezifana neGame, Pick n Pay, Makro, Shoprite, Woolworth okulindeleke ukuba zivule amagathsa azo kwezinye izinxanxathela zezitolo KwaZulu-Natal. UKhuzeni uthe ukubonakala komnyakazo walezi zitolo ezibalwe ngenhla kubeka sobala ukuthi ikwaZulu-Natal iyisizinda samabhizinisi.
UMnu Bheki Cele uNgqongqoshe wamaPhoyisa kuzwelonke unxuse uzinzo kwaizakhamizi zakwaZulu-Natal ethi mayihlale phansi ibambe umthetho. Uncome umsebenzi owenziwe ngamasosha, amaphoyisa ngokuhlukana kwemikhakha yawo ngokusebenza ngokusemandleni ukudambisa isimo esifundazweni. Uncome amaphoyisa aseThekwini iMetro Polica ngokubambisana nawe-Tactical Response Team (TRT) abejutshwe eMaoti, eBhambayi, ePhoenix naseZwelitsha ukudambisa isimo ebesimanzonzo.